World of Tanks Blitz, MMO iray manontolo ho an'ny Android | Androidsis
World of Tanks Blitz, iray amin'ireo MMO Online tsara indrindra misy hatramin'izao nahatratra ny Play Store ihany tamin'ny farany. Na dia efa nisy aza ny pejiny manokana, dia tsy azo natao ny nampidina azy io fa tsy maintsy mitady fomba hafa hisintonana ny APK, zavatra tsy tian'ny mpampiasa rehetra.
Ny iray amin'ireo toetra tsara indrindra an'ity MMO antsoina hoe World of Tanks Blitz ity dia manolotra fanohanana multiplatform, izay mamela anao handrava ny mpanohitra ny fitaovana finday hafa toa ireo manana iOS ho toy ny rafitra miasa. Koa miomàna ho amin'ny ady tanky 7v7 entina amin'ny Ady Lehibe Faharoa.
1 Mandeha ny tifitifitra, tonga ny tifitifitra
2 Sary tonga lafatra amin'ny ady tanky
Mandeha ny tifitifitra, tonga ny tifitifitra
Tamin'ny fiandohan'ny volana novambra nanararaotra nanakaiky kokoa izahay mankany amin'ny World of Tanks Blitz izay manasongadina ny Fiara mifono vy 100 hafindra mankany amin'ny kianja 10 samihafa misy kilasy efatra. Hitanay ny tenantsika alohan'ny rafitra lalao toy ny vatolampy, taratasy ary hety, na dia misy akora iray hafa miaraka amin'ireo tanky mpandrava aza. Ny hafa kosa kilasy maivana sy afovoany ary mavesatra. Ary eto isika dia tsy hiditra amin'ny resaka tsy misy dikany na lalina, fa hampiasa ny mety ho afo, fanoherana ary fanodikodinana hanapotehana ireo fahavalontsika an-tserasera.
Raha mpankafy an'ireto karazana lalao ady ireto ianao, azo antoka fa World of Tanks Blitz dia ho lalao efa napetrakao amin'ny Android anao mandritra ny fotoana lava. Lalao 7 vs 7 manana famporisihana lehibe izy ireo ary mitondra multiplayer amin'ny fotoana tena izy amin'ny smartphone Android. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy tsara dia ny chat ingame tenany hahafahany manafika bebe kokoa amin'ireo mpanohitra anao na manatanteraka paikady sasany.
Sary tonga lafatra amin'ny ady tanky
Ankoatry ny multiplayer, World of Tanks Blitz dia manana niasa tsara ny singa rehetra mamorona lalao tsara, na amin'ny endrika hita maso, amin'ny feo na amin'ny fikirakirana ireo tanky samihafa. Ho traikefa nahafinaritra ny mankafy an'io karazana ady amin'ny fotoana tena izy avy amin'ny efijery amin'ny takelaka 9-inch hah kendrena ireo fahavalo samihafa ary tsy hamela ny tanky raha tsy misy tafondro.
Miatrika maodely freemium isika, noho izany azonao atao ny mahazo amin'ny fividianana fampiharana, saingy tsy ho nilaina mihitsy izy ireo hahafahany milalao lalao tsara. Ho an'ny ambiny, ianareo izay mahalala an'ity andiany PC ity dia tsy handiso fanantenana anao velively satria tsy hahita kely ianao mankafy ny ady tsara indrindra eo amin'ny fiara mifono vy amin'ny Android. Lalao tsara atolotra amin'ny Androidsis.
Developer: Vondrona mpiady
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » World of Tanks Blitz dia azo alaina ao amin'ny Play Store ihany amin'ny farany
SNK dia namoaka ny Mpanjakan'ny mpiady 2012 maimaim-poana hankalazana ny faha-20 taonan'ny andiany